कहाँ जान्छन् यी आर्यघाटमा लास पोलिएका दाउरा ? - HelloKhabar
कहाँ जान्छन् यी आर्यघाटमा लास पोलिएका दाउरा ?
काठमाडौं । प्रस्तुत समाचारमा दिइएको तस्बीर पशुपतिमा लास पोलिसके पछि बाँकी रहेका दाउराहरु एक युवकले कतै लैजादैं गरेको अवस्थाको हो । लास जलाएर सकिएपछिको बाँकी दाउरा एक युवकले निक्कै व्यवस्थित साथ गाडीमा लोड गर्न लगिरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
बरिष्ठ फोटो पत्रकार राजेश ढुंगानाले यो तस्बीर खिचेर आफ्नो फेसबुक वालमा राखेका छन् । उनले यो फोटो राख्दै एउटा प्रश्न गरेका छन्– ‘आखिर कहाँ जान्छन्, यी पशुपतिमा लास पोलिएका दाउरा ?’ उनको फोटो र क्याम्सनले धेरैको मन छोएको पाउन सकिन्छ । फोटो पत्रकार ढुंगानालाई फोटोको क्रेडिट दिँदै धेरै जना साामजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पनि यही फोटो राखेर प्रश्न गरेका छन्– ‘कहाँ जान्छन् यी आर्यघाटमा लास पोलिएका दाउरा ?’
फेसबुकमा निक्कै सक्रिय देखिने देवेन्द्र कोइरालाले उहीँ प्रश्न गरेर यसै फोटोलाई सेयर गरेका छन् । फोटो राखेको १५ मिनेटमा नै उनको फोटोमा ३० वटा कमेन्ट आएको छ । जसमा धेरैले भने सेकुवा पोल्न यो दाउरा लाने गरेको कमेन्ट गरेका छन् । कहिले कहीँ लेख रचना समेत लेखिरहने दिल निशानी कमेन्टमा भन्छन्– ‘सेकुवा पाक्छन् ।’ उनी जस्तै धेरैले सेकुवा पकाउन यो दाउरा लैजाने गरेको कमेन्ट गरेका छन् । तर, कतिपयले भने मकै पोल्न, नान पोल्न तथा इट्टा भट्टामा लैजाने गरेको समेत उल्लेख गरेका छन् । यी दाउरा कहाँ लगिन्छ भन्ने ठ्याक्कै खुलेको छैन । तर, सामाजिक सञ्जालमा भने यसले धेरैको मन खिचिरहेको पाउन सकिन्छ ।